GatesAir မှ New Zealand မှ MediaWorks ကို IP ကွန်ယက်မှဖိသိပ်ခြင်းမရှိသောအသံသို့ပြောင်းလဲခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အိုင်ပီကွန်ယက်အဖွဲ့ကျော် uncompressed အသံမှ GatesAir ကူးအပြောင်းကာလ MediaWorks နယူးဇီလန်
အိုင်ပီကွန်ယက်အဖွဲ့ကျော် uncompressed အသံမှ GatesAir ကူးအပြောင်းကာလ MediaWorks နယူးဇီလန်
Intraplex အိုင်ပီ Link ကို MPXp ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်နောက်မျိုးဆက် Flexiva စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကူးအပြောင်း, ဒေသခံကြော်ငြာ INSERT ရိုးရှင်းအသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် Single-အကြိမ်ရေကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီး networking ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ
Cincinnati, စက်တင်ဘာလ 6, 2019 - GatesAirကြိုးမဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, Over-the-air တီဗီနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု compressed လုပ်မထားတဲ့အသံ IP ကိုကျော်ကွန်ရက်ဗိသုကာရန်, တစ်နယူးဇီလန်အခြေစိုက်ရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယိုနှင့်အပြန်အလှန်မီဒီယာကုမ္ပဏီသက်တမ်းကြာဖောက်သည် MediaWorks ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အသစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်အသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်စနစ်ကရှုပ်ထွေးလျှော့ချနှင့် single-အကြိမ်ရေ FM ရေဒီယိုကွန်ယက် (SFN) ကိုဖြတ်ပြီးချိတ်ဆက်တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဖြူးများ၏ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချမှာတစ်ကြိမ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းအားလုံးကိုအချက်ပြစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် signal ကိုပေးပို့ streamlines ။
အထူးသ MediaWorks ရေဒီယိုရဲ့အထင်ကရစီးပွားဖြစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အဆိုပါအသံ, စီမံကိန်းစင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် Waikato ဒေသတွင်း၌အော့ကလန်ရဲ့က Sky မျှော်စင်နှင့်တောင်ပေါ်မှာ Ruru မှာ 93.8MHz FM ရေအပေါ် synchronous က transmitter မှ Ponsonby, အော့ကလန်, ၎င်း၏စတူဒီယိုထဲကနေအစီအစဉ်ကိုအသံများ၏ပို့ဆောင်မှုပိုကောင်းစေပါတယ် ။ GatesAir ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက် Gencom နည်းပညာယခု-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအိုင်ပီ-based configuration ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ GatesAir ထုတ်ကုန်အထူးကုနှင့် MediaWorks အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်, ရှိသမျှ presales ဒီဇိုင်းထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။
မာကု Simpson, Gencom နည်းပညာမှာအကောင့်မန်နေဂျာဂီယာနှင့်ဖြန့်ဖြူးသောစနစ်များ, တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးမွေ TDM ကွန်ရက်အခြေခံအဆောက်အအုံထဲကနေပြောင်းရွှေ့လာအဆင့်မြှင့်များအတွက် "သုဒ္ဓဓာတ်ကူပစ္စည်း" ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြု။ ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက် FM ရေ baseband သယ်ဆောင်ရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီထုတ်လွှင့် site ကိုမှာ FM ရေဒီယို signal ကိုမျိုးဆက်ကူညီပံ့ပိုးရန် Flexiva FAX50 စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူ၎င်း၏ Single-အကြိမ်ရေဂီယာကွန်ရက် (SFN) ကိုဖြတ်ပြီးဒေသခံကြော်ငြာ INSERT စီမံခန့်ခွဲဖို့ built-in SynchroCast နည်းပညာနှင့်အတူ Intraplex အိုင်ပီ Link ကို MPXp ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ leverages ။ အဆိုပါခေတ်မီဒီဇိုင်းကိုဒေသခံကြော်ငြာ INSERT များအတွက်သီးခြားစတူဒီယိုမှအစီအစဉ်ကိုအသံသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်။
"ဒါကြောင့်အခုအော့ကလန်စတူဒီယိုမှတိုက်ရိုက်လာအဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆုံးစွန်၏မကြာသေးခင်ကရရှိနိုင်မှုအားဖြင့်သတိပေးခံရစဉ် IP ကိုမှနည်းပညာချိတ်ဆက်အဟောင်းတွေ E1 မှရွှေ့ပြောင်း, ကိုလည်းအော့ကလန် transmitter ကိုများအတွက်လမ်းကြောင်း၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူတာ enabled," Simpson ကဆိုသည်။ "ဒီ signal ကိုပေါက်နှင့်ဒေသခံကြော်ငြာထည့်သွင်းရန်အတွက် Hamilton ကမှလမ်းကြောင်းရန်အော့ကလန်အစီအစဉ်ကို Mediaworks လိုအပ်သောအမွေဗိသုကာများ၏အားနည်းချက်ပြဿနာများကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါ SFN ဖြတ်ပြီး synchronous စွမ်းဆောင်ရည်ထူးချွန်ခဲ့များနှင့် Mediaworks လာမည့်မျိုးဆက် Flexiva စိတ်လှုပ်ရှားထံမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံအရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကတင်ပြထားပါတယ်။ "
ray Smith က MediaWorks နယူးဇီလန်များအတွက်ဂီယာမန်နေဂျာအိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျော် MPX ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူအသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်မှုဆက်နွယ်နေပါသည်။ အဆိုပါအိုင်ပီ Link ကို MPXp ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများစတူဒီယိုမှာ Analog စ-to-ဒစ်ဂျစ်တယ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်ရာထူးအားလုံးအသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို minimize လုပ်ရသော AES192 ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထောက်ခံပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ transmitter ကိုက်ဘ်ဆိုက်များမှာအသံညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။
"AES192 ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့တစ်ခုလုံးကိုကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အားလုံးကိုလမ်း High-end ဒီဂျစ်တယ်အသံအရည်အသွေးကိုထိနျးသိမျးနိုငျ," စမစ်ကဆိုသည်။ "အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျော် uncompressed MPX ယင်းက transmitter အပြည့်အဝချုံ့ algorithms များကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုဒယ်ဆီဘယ် overshoot မပါဘဲ modulated နိုင်သေချာ။ ပျမ်းမျှအသံအဆင့်ဆင့်ဟာကူးစက် signal ကို FM ရေဒီယိုကိုပူဇော်နိုငျသောအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အသံအရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းဆိုလိုတာကမြင့်ပါ။ "
အဆိုပါ SFN အော့ကလန်စီးတီးနှင့် Hamilton က၏မြို့နှင့်ကျေးလက် Waikato ပြည်နယ်၏ကြီးမားသောအဘို့တလျှောက်လုံးဘူတာရုံရဲ့ signal ကိုထုတ်လွှင်ထားတဲ့တောင်ကုန်းထိပ် site ကိုတောင်ပေါ်က Ruru, ဖုံးလွှမ်း။ Simpson ရဲ့ IP Link ကို MPXp ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများသုံးလေးနှစ်အတွင်းတစ်ဦးမျှော်မှန်းရွယ်နှင့်အတူ, IP ကိုမှစျေးကြီး E1 ဆားကစ်ကနေဖက်ပြောင်းအားဖြင့်ကျယ်ပြန် SFN တစ်လွှားမှာ "သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်အကျိုးအတွက်" မိတ်ဆက်ကြပြီထပ်ပြောသည်။
"အသံ IP ကိုကျော်မွေးစားကပိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်က၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအစီရင်ခံအဖြစ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆက်လက်" Rich Redmond, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ GatesAir များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့က IP ကိုမှ MediaWorks နယူးဇီလန်ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ, အဖြစ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့် Gencom နည်းပညာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတနာများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၏အောင်မြင်မှုကိုအစီရင်ခံရန်ကျေးဇူးတင်ပါ။ "
GatesAir, Inc က The ခွေ့ Group ၏တစ်အစုစုကုမ္ပဏီ, Multichannel များအတွက်မစ်ရှင်-အရေးပါန်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးမဲ့ spectrum ကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, Over-the-air ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်မှုအတွက်ပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ နီးပါး 100 နှစ်ပေါင်းမတူနိုင်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Over-the-air ကွန်ရက်များ Powering, GatesAir ရဲ့ turnkey ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ transmit လုပ်ဖို့ထုတ်လွှင့် enable ။ 185 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်တကွ, ကုမ္ပဏီ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းထိုးဖောက်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်ဥရောပထဲမှာဒီဇိုင်းနှင့်စုဝေးအားလုံးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ။ အလည်အပတ် www.gatesair.com Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များများအတွက် www.facebook.com/gatesair, နှင့် Twitter မှာကိုလိုကျနာ @GatesAir.
အဲလက်ခ်ဂိုးအားဖြင့် 1987 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဂိုးအုပ်စု, က၎င်း၏ကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းအသိပညာ, ဆယ်စုနှစ်ရှည်လျားအတွေ့အကြုံနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြို့တော်အခြေစိုက်စခန်းထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျကွောငျးကိုထူးခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ 30 တစ်နှစ်သမိုင်းကျော်, ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတန်ဖိုးကိုဖန်တီးနက်၏နားလည်မှုနှင့်နျဖိုးထားတီထွင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.gores.com.
Gencom နည်းပညာမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံနည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများ၏နယူးဇီလန်ရဲ့ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ထုတ်လုပ်မှု, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု, ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပေါ်, RF ဂီယာ, အင်တာနက်ပေးပို့နှင့်ဤဖြစ်စဉ်များအပေါငျးတို့သအခြေခံသောအမာခံအိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံအပါအဝင်မီဒီယာနည်းပညာစည်းကမ်းများကို၏ကျယ်ပြန့ဖြတ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး 50 တစ်နှစ်တွင် track record နှင့်အတူ, Gencom မဆိုမီဒီယာနည်းပညာလိုအပ်ချက်အဘို့ရှုပ်ထွေးစနစ်များကိုဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့အတွေ့အကြုံ, စွမ်းရည်နှင့်ရောင်းချသူဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.gencom.com
Tightrope နှင့် ENCO Forge Partnership တို့သည် Cablecast Community Media Workflows သို့အလိုအလျောက်ပိတ်ထားသောစာတန်းများကိုယူဆောင်လာသည် - မေလ 11, 2020
ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-06
ယခင်: SRT နှင့်အတူပြည်သူ့အင်တာနက်ကိုကျော် Encrypted ဗီဒီယိုပေးပို့ခြင်းတစ်ခုNDI® Delivery ပလက်ဖောင်း - BirdDog BirdDog တိမ်တိုက်ဦးလွတ်မြောက်
နောက်တစ်ခု: အနီရောင်ဧရာရှေ Worley နှင့်အတူနယူး Star Wars VFX သင်ခန်းစာဦးလွတ်မြောက်